egwu ọsọ ọsọ
egwu ọsọ ọsọ 2 afọ 9 ọnwa gara aga #819
Anọ m na ndenye aha 6 ọnwa jumbo ma enwere m ike ịdọrọ 1300KB / sec download ọsọ ọsọ na saịtị a n'agbanyeghị ihe nbudata ya, nke a bụ naanị saịtị m na-enwe nsogbu na. onye nwere ike ile anya ọsọ ọsọ a?
egwu ọsọ ọsọ 2 afọ 9 ọnwa gara aga #821
Enwere m bandwit ọzọ na ihe nkesa anyị taa, biko gbalịa ọzọ ugbu a.
Site na Monday enwere m oge nhazi na data-etiti anyị na-akwado ndị ọrụ anyị, m ga-arịọ maka kaadị bandwit ọzọ otú ahụ n'oge kachasị oke oge anyị nwere ike ịnọgide na-eje ozi dị elu.
egwu ọsọ ọsọ 2 afọ 9 ọnwa gara aga #822
Ana m ezigara dịka onye ọrụ, ọ bụghị onye na-arụ ọrụ, ma enwebeghị m nsogbu na ọsọ ọsọ na Rikoooo.
egwu ọsọ ọsọ 2 afọ 8 ọnwa gara aga #823
gara maka osprey, ọ were naanị awa 26 wee mepee faịlụ efu, gafere oge nke abụọ nke 12hrs 45 na faịlụ efu, wee gaa ma mee naanị otu nke na-arụ ọrụ ma emesia onye okike depụtara ihe banyere ịwụnye ihe Adụ wụnye, iji dokwuo anya, ọ na-abụkarị mgbe ọ na-ekwu maka ịwụnye mmanye iji jiri ngwaahịa ya thry menu na nzuzo ma ọ bụ thry a click and run, ihe mgbagwoju anya bu nke a, o nweghi ihe gbasara ya na faili a, aghaghi agha oso ihe ngosi ụgbọ elu MS dị na onye nchịkwa ya na pịa aka nri wee ngwaahịa ahụ ga-ebu. Ọ bụrụ na emeghị otu ọ ọ ga - ebute ọtụtụ mkpọka ma ọ bụ ngere ihuenyo. Emere m nyocha, gịnị kpatara na ọ bụ mgbe niile ka ọ bụrụ iwu akara iji ndị nchịkwa iji jiri mmemme ahụ. N'ime ọtụtụ puku mgbakwunye ụzọ n'ụzọ ụgbọ elu nke a bụ naanị nke mechara gwụ ịchịkwa cfg m. faịlụ, m banyere na hụrụ ọtụtụ Ndepụta. Theres nwekwara ihe egwu dị na nhazi a ma ọ bụrụ na enwere oghere nwere ike mebie mmemme windo. Ọ bụrụ na ị na-eme nbudata a ga-eme nkwado ndabere nke faịlụ cfg gị tupu ịwụnye. Ọnọdụ faịlụ a dị ka% APPDATA% MICROSOFT /FSX. NKE AIROLANE ebudatara bụ ezigbo ọhụ ụzọ m hụrụ n'ime afọ iri nke ụdị a na ụdị a, ntụpọ zuru oke, ọ nwere ike ịnweta ntakịrị iji zere ngwa ngwa ma ọ bụ imebi ihe ọ bụla na ntanetị na ntanetị dị mkpa iji bido ibido na mbụ ma fechaa, ma ọ ga-abara uru. Agaghị ewepụ Yoy otu oge ị matara na ihe ị ga - eme bụ pịa na nchịkwa ka ọ bụrụ onye nchịkwa, na ịme bling. Ndị ọzọ karịa na ịnwale ụzọ ọ bụla ga-abụ oge siri ike iji merie ESPECIALLY ma ọ bụrụ na echere awa 24 maka nbudata efu. Ma saịtị kachasị mma yana ihe kachasị mma ons bar dịghị.
egwu ọsọ ọsọ 2 afọ 8 ọnwa gara aga #824
egwu ọsọ ọsọ 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1091
ikwesiri ịbanye na menu kọmputa gị ka ị gbanwee na ntanetị gị ka ị gaa rikoooo, ma ọ bụrụ na ị na-eme na faịlụ ahụ ga-anọ n'ihu, ma lelee ntọala ịntanetị gị ma ọ bụrụ na ị naghị eji PPOE (ị ga-eji paswọọdụ banye ịntanetị) gbanwee ya na nhọrọ nke ọzọ. Otu isi ihe mgba nke kompeni na-eme ka ọ banye na intaneti na-ezighi ezi Portal, ana m eji ntanetị mpaghara mgbe ụfọdụ na im na East Coast na mpaghara mpaghara mpaghara na mgbe ụfọdụ ọ na-egbu oge n'ihi oke nbudata ndị ndị sava na-ahazi ya. Hụkwaa oge nchere, ma ọ bụrụ na ọghọm gị na US bụ ịnwa nbudata gị mgbe onye ọ bụla nọ na Europe nọ n'oge kachasị elu nke ụbọchị ha. Ja ha n'isi mgbede oge ha. Lelee ntọala ndị ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba kọmputa gị ọsọ karịa 200% dee, ọ bụrụ na ahụrụ m na m ga-agwa gị ihe ị ga-eme.